Milalao toy ny 'Evil Dead's' Ash Williams any 'Skyrim' - iHorror
Home Games Milalao toy ny 'Evil Dead's' Ash Williams any 'Skyrim'
Milalao toy ny 'Evil Dead's' Ash Williams any 'Skyrim'
by Trey Hilburn III Jolay 20, 2021 957 hevitra
Azo antoka fa efa nilalao isika rehetra Skyrim amin'ny endrika sy sehatra tokana fantatra amin'ny zanak'olombelona ankehitriny. Todd Howard sy Bethesda dia nanamafy fa i Skyrim dia hihazakazaka amin'ny zavatra rehetra ao anatin'izany pong raha omena fotoana ampy. Tsy mitaraina aho fa lalao mahafinaritra io. Fanampin'izay, mahafinaritra ny mods. Mod tena mahafinaritra izay natoron'ny PC Gamer, dia iray izay mahita anao mandray ny anjara asan'izy ireo Ratsy maty Ash Williams amin'ny alàlan'ny manaraka… ary angamba ny faha-arivo Skyrim milalaova.
Ny mod mahita anao mandray ny anjara asan'ny Ash feno amin'ny rojo vy sy feo. Marina izany, tonga feno olona iray-milay tsara indrindra avy aminy izy, izay azo antoka fa hanontany anao Skyrim hanome anao siramamy amin'ny faran'ny alina.
Raha te hilalao toy ny Ash dia mila mametraka ny Evil Dead mod ary mandehana avy any. Tena ilaina ny fametrahana hafa Skyrim ary ny fotoana mety handraisanao fampiharana mod.
Ka inona no lazainao, Screwhead? Handray ny Skyrim milentika toy ny mpamonjy malalantsika Ash Williams? Ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra.
Ny talen'ny Fear Street dia manana drafitra lehibe amin'ny fanitarana an'izao rehetra izao. Vakio bebe kokoa eto.